Hilibka cas waxa uu kordhin karaa halista dhimashada ee cuduro dhowr ah - Horn Future
Hilibka cas waxa uu kordhin karaa halista dhimashada ee cuduro dhowr ah
Daraasad cusub oo Maraykan ah ayaa kusoo gabagabeeysay in cunista hilibka ka badan ee casaanka ah uu xidhiidh lala leeyahay halista korodhka dhimashada ay sababaan 8 nuuc oo ah cudurada caadiga ah, oo ay ku jiraan kansarka, macaanka,cudurada wadnaha,iyo sidoo kale dhamaan cudurrada sababa dhimashada.
Cilmi baadhayaasha daraasadan ayaa waxa ay dabo-gal ku hayeen caadooyinka caafimaad iyo cuntadooda ku dhawaad 537 kun oo ah dad waaweyn oo da’doodu u dhaxeeyso 50 ilaa 71 jir, taas oo laga sameeyay 6 gobolo ah oo katirsan dalka Mareykanka iyo 2 magaalo oo waawayn in ka badan ku dhawaad 16 sano, taas oo lagu falanqeeyay xogta sahankan iyo isticmaalka guud ee hilibka iyo sidoo kale hilibka cas ee warshaduhu ay farsameeyaan ama ay sameeyaan iyo isticmaalka hilibka cad.
Cilmi baadhayaashu waxay heleen dadkii quutay tiro badan oo aad u weyn oo hilibka cas ah inay korodhay suurogalnimada dhimashadooda sababo la xidhiidha nuucyada kala duwan ee sababa 26% markii la barbar dhigay kuwii cunay tiro ka yar.
Taas kasoo horjeedkeega,cilmi-baadhayaalku waxa ay sheegeen in dadkii cunay tiro aad u weyn oo hilibka cad ah uu yaraaday u nuglaanshaha inay u dhintaan sababahan 25% intii lagu guda jiray xilligii daraasaddan markii la barbar dhigay dadkii cunay tiro ka yar.
Arash Etemadi oo ah oo kamid ah kooxda hogaaminaysay daraasaddan oo katirsan xarunta Qaranka ee Kansarka ee Maraykanka ee (National Cancer Institute),ayaa sheegay in daraasadan ay xaqiijisay warbixino hore oo xidhiidha ka dhexeeya hilibka cas iyo dhimashada degdegga ah iyo sidoo kale ay tahay mid weyn oo ku filan inay muujiso xidhiidhka ka dhaxeeya 9 kamid ah waxyaabaha kala duwan ee sababa dhimashada.
Waxa xeel-dheerahan uu intaa raaciyay fariin uu ku qoray e-mail ka,taas oo uu yidhi “Waxaan helay sido kale heerka guud ee isticmaalka hilibkan laftigiisa,dadkii sheegay inay raaceen nidaam uu ku jiro heer tiro badan oo cunitaanka hilibka cad ah in heerka dhimashada degdegga ah ay ku yar tahay dhexdooda,”.
Waxaa xusid mudan hilibka cas ee daraasaddan lagu faafiyay majalladda “The BMG” inay ku jireen hilibka lo’da,Idaha,doofaarka,halka hilibka cad ay ka kamid yihiin digaaga oo uu ku jiro ka loo yaqaano (turkey) iyo kalluunka.
Xigasho : Reuters
« New York Times: Maraykanku waxa uu ku dilay Iraq iyo Syria 3,100 qof oo rayid ah	» Gaadhi xamuul ah oo ay saarnayd sun halis ah oo ku rogmaday dixda Xumbuli+video